လင်းပြာနွေ: September 2008
အလွမ်းကို ရင်နဲ့ မက
တမ်းတနာက တဆစ်ဆစ်ကိုက်တယ် ။
အုပ်ဖွဲ့ လှောင်ပြောင်လို့ ။
စိတ်ရဲ့ ပရမ်းပတာ လွင့်မျောမှုမှာ
ပိုသီဖတ်သီ ပြေးဝင်ဝင်လာတယ် ။
ဘယ်မှာလဲ .. ချစ်သူရယ်
ဒီသက္ကရာဇ်ရဲ့ ဒီလ .......
အလွမ်းနဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 1:15 AM4comments:
အတိတ်ကို ပျံသန်း - အငဲ
ဒိုင်ယာရီအိမ်အိုဟောင်းလေးထဲ ငါ ကြုံပြီ ဒါဟာ အချစ်တဲ့လား
ကံကြမာရယ် ဝေဒနာတွေဟာ ရောက်ရှိခဲ့
ဘယ်ဆီမှာလဲ တစ်ခါက တို့ချစ်ခြင်း နေ့ရက်များ ငါ ဆုံးရှုံး
ဝေးမသွားခင် ဖက်ထားစမ်းပါ ချစ်တတ်ရင် မငိုနဲ့ဦး
အိုး…. စည်းများခြားလို့ တို့နှစ်ယောက် ဝေးပြီလား
တို့အဖြစ်က ဆိုးလွန်း အတိတ်ကို ပြန်တွေးတိုင်း ငါ့နှလုံးသား ကွဲအက်
အချစ်ကြောင့် အလွမ်းရဲ့ ဒုက္ခကျေးကျွန်များ
သွေးကြောထဲ စိမ့်ဝင် မင်းရဲ့အနမ်းလေး…
တစ်ခါက မင်းရယ်ကိုယ် ချစ်ခြင်းကောင်းကင်မှာ
ဒီအတိတ်ရဲ့နေ့လေး… အတိတ်ရဲ့နေ့လေး… အို...
တစ်ချိန်မှာ ဒီလိုခွဲကြဖို့ ငါလေ ကြိုတင်မစဉ်းစားခဲ့
ရီဝေစွာ ယစ်မူး မင်းအချစ်နဲ့ ဒီရာသီချိုတွေ ငါ ဖြတ်လျှောက်ရင်း
ဘယ်ဆီမှာလဲ ဟို တစ်ခါကချစ်ခဲ့ခြင်း နေ့ရင်းများ ငါ လွမ်းနေလိုက်
မင်းပါးပြင် ခိုနားဖို့ရာ ငါနေ့တွေ ပြန်ရမလား…
အိုး…. စည်းများခြားလို့ တို့နှစ်ယောက် ဝေးကွာသွား
တို့အဖြစ်က ဆိုးမြဲ အတိတ်ကို ပြန်တွေးတိုင်း ငါ့နှလုံးသား ကွဲအက်
တစ်ခါက အချစ်တွေကို ပြန်ရလိုက်ချစ်တယ်
ငါတို့ရဲ့ နေ့လေး… ငါတို့ရဲ့နေ့လေး.. ရေး...
စည်းများခြားလို့ တို့နှစ်ယောက် ဝေးပြီလား
အေးချမ်းတဲ့ ချစ်သူ ကောင်းကင်ရဲ့အရိပ်
တစ်ခါက ပါးပြင်မှာ ခိုနားလိုက်ချင်တယ်
ငါတို့ရဲ့ နေ့လေး… ငါတို့ရဲ့အချစ်လေး..
တို့ရဲ့ အချစ်လေး… ပြန်ရဦးမလား မျှော်လင့်ခဲ့
စွန့်ပစ်ခဲ့ မင်းနဲ့ တို့ဘ၀ဟာ ဝေးပြီ
စည်းများခြားလို့ တို့နှစ်ယောက် ဝေးပြီလား။ ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 8:03 PM2comments:
တံခါးကို တွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လာမည်ဆိုလျှင် မှောင်ရိပ်အုပ်မိုးလျက် တတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်နေသော အခန်းက နေ့တိုင်းစောင့်ကြိုနေပါသည်။ နေ့တိုင်းလုပ်နေကျ အလုပ်များအနေဖြင့် တံခါးလက်ကိုင်ဖုကို သော့တံထိုးပြီး လှည့်ဖွင့်မည်။ ဖိနပ်ကို ချွတ်မည်။ သော့ကို စားပွဲပေါ်သို့ ပစ်တင်လိုက်မည်။ ကွန်ပျုတာကို ဖွင့်မည်။ ဤနေ့အတွက် စကားပြောဖေါ် မည်သူရှိမလဲ အွန်လိုင်းတွင် ကြည့်မည်။ အင်္ကျီအ၀တ်စား လဲမည်။ စားပွဲတွင် စထိုင်မည်။ နံနက်မိုးသောက်ကာနီးတွင် အိပ်မည်။ ရံဖန်ရံခါ အနေဖြင့် ဘ၀တူ သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆုံမည်။ ရံဖန်ရံခါ သောက်ကြမည်။ ရံဖန်ရံခါ ဟိုဒီလည်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အဆုံး၌ ဤမှောင်ရိပ်ကျနေသော အခန်းတွင်းသို့ တွားဝင်ခိုအောင်းရပြန်သည်ချည်းပင်။
အရင်ကဆို အိပ်ပြန်မိုးချုပ်လျှင် အိမ်သို့ကုတ်ချောင်းချောင်း ၀င်ရသည် ချည်းပင်။ တစ်စုံတစ်ခု လုပ်မည်ဆိုလျှင် အိပ်ပြန်နောက်ကျမည်လား.. အိမ်ကသိလျှင်မည်သို့ ဖြစ်မည် နည်း စသည်ဖြင့် မလွတ်လပ်နိုင်ပါ။ အိမ်ပြန် ရောက်ပြီဆိုလျှင်လည်း မိသားစုနှင့်စကားပြော တီဗွီကြည့် အချိန်များ မည်သို့ကုန်၍ ကုန်သွားမှန်းပင်မသိပေ။ ခေါင်းထဲတွင် ငါမလွတ်ဘူး ဆိုသောအသိသည် စိုးမိုးနေသည်။ ငါလွတ်လပ်ချင်သည်။ ဤမြေဤရေ၌ ငါမလွတ်လပ်။
ယခု ကျွန်ပ်လွတ်လပ်နေပေပြီ။ ဤအရပ်၌ ကျွန်ပ် ပြန်လိုသည့် အချိန်ပြန်နိုင်သည်။ သွားလိုသည့်နေရာ သွားနိုင်သည်။ ပြောလိုသည့် စကား ပြောနိုင်သည်။ အခန်းသို့ ကုပ်ချောင်းချောင်း ပြန်လာရန်မလို။ အဖေအိပ်ပြီလား ကြည့်ရန်မလို။ ဟို ဒီ အကြောင်းပြချက်များ ပေးရန်မလို။ ဟိုမျက်နှာ ဒီမျက်နှာ ကြည့်ရန်မလို။ သို့သော် အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ပ်နေထိုင်ရာအခန်းသည် မှုန်ကုပ်ကုပ် ဖြစ်နေသနည်း။ သန်းခေါင်းနှင့်အတူ ရောနှောပါလာသော လရောင်သည် အဘယ်ကြောင့် အထီးကျန်ရောင် သန်းနေသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် အွန်လိုင်းတွင် စကားပြောဖော်တစ်စုံ တစ်ယောက်များရှိလေမည်လားဟု ရှာဖွေမိနေသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် အအိပ်ခက်နေသနည်း။ အခန်း တံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ကျွန်ပ်အား စောင့်ကြိုနေသည့် တစ်စုံတစ်ရာ အဘယ်ကြောင့်ရှိမနေသနည်း.....ဥပမာ ခွေးလေး ဖြစ်ဖြစ် ကြောင်လေး ဖြစ်ဖြစ်...နာရီနှိုးစက်မြည်သံပင် ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်လှသည်။ လူဆိုသည်မှာ အုံသင်းဖွဲ့နေထိုင်တတ်သောသတ္တ၀ါများဖြစ်သည် ဆိုသည်မှာ မှန်နေပြီလော။ သို့မဟုတ် ကျွန်ပ်သည် မွေးစတည်းက မလွတ်လပ်ခြင်းနှင့် ယဉ်ပါးခဲ့ ၍လော။ သို့တည်းမဟုတ် လူတို့၏စိတ်သည် မူလ၌ပင် အချုပ်နှောင်ခံလိုသော သဘောရှိ၍လော..။ ဤသို့ဆိုလျှင် လူသားတို့သည် လွတ်မြောက်မှုကို ရှာဖို့မသင့်တော့ပေ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘယ်သောခါမျှ တွေ့နိုင်မည် မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်မှုများသာဖြစ်မည်။
လူသားများသည် မိမိတစ်ဝပ်စာ အကျဉ်းထောင်ဆောက်၍ နေထိုင်သူများဖြစ်သည်။ တစ်ခါတရံ လောဘကြီး၍ တခြား မိမိတွယ်ရာ လူများအတွက်ပါ အကျဉ်းထောင်များ ဆောက်လုပ် ပေးတတ်ကြသေးသည်။ထိုသို့ဆိုလျှင် ကျွန်ပ်သည် မည်သို့သော လူသားမ တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီနည်း။ ကျွန်ပ်ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်နေထိုင်သော အကျဉ်းထောင်သည် အတော်ပင် ခိုင်ခန့်နေပြီမှန်း သိသော်လည်း ကျွန်ပ်ချစ်သော သူများအား မည်သို့သော အကျဉ်းထောင်များ ဆောက်လုပ် ပေးခဲ့မိပြီနည်း..... ဤမှုန်ကုပ်ကုပ်အခန်းငယ်ထဲတွင် ကျွန်ပ်နှင့်အတူ ကျွန်ပ်၏ပုံရိပ်ယောင်များလည်း ရှင်သန် နေထိုင်လျုက် ရှိကြောင်း ထိတ်လန့်စွာ တွေ့ရှိခဲ့၏။
Posted by လင်းပြာနွေ at 11:33 AM6comments: